Enwekwu ihe akaebe nke mgbasa ozi ọzọ na-achịkwa site n'aka onye akaebe nke na-achọpụta Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 Ka 2019	• 42 Comments
N'ọtụtụ isiokwu, akọwapụtara m otú e si edozi mkparị na nkwarụ a chọtara na adreesị m site n'aka onye ọrụ obodo bụ Jeroen Hoogeweij. O nwere ike ime nke a n'enwetaghi ntaramahụhụ, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla e mere na nkwupụta m. Ha nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ruo taa ma ọ bụghị onye ọka iwu nke chọrọ ịrụ ọrụ na ya. Na-agbali iwepu njikọ site na ndepụta ọchụchọ Google na-eduga n'ịjụ ya n'agbanyeghị iwu GDPR metụtara dum Europe, ma e wezụga maka ndị edozighị ya.
O doro anya na onye ọ bụla na-anọghị na ogwe aka mgbasa ozi ndị ọzọ a na-achịkwa aghaghị ịwakpo ma daa mbà. N'ezie, mwakpo ndị ọzọ na-emetụtakwa na ọwa ọzọ mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ a maara nke ọma, mana e meziri nke a iji bido ịdọrọ uche n'isiokwu ndị a chọrọ. Ọ dịghị mgbe ọ bụla n'ime ụdị okike a na-emeso ndị na-adịghị edozi ya, ọbụna aha na ụlọ akwụkwọ nwa m nwanyị ka a na-ebipụta.
Isi iyi nke nkwutọ na nkwulu a mara na ya ga-enwetakwa onye ọ bụ ọhụrụ, n'ihi na ọ bụghị ihe dị anya na onye nkwado nke Aleister Crowley na onye ụkọchukwu RTD bụ Jeroen Hoogeweij gbanwere ghọọ nwanyị, nke mere na ọ gafere ndụ dị ka Naomi Hoogeweij. N'oge a nile, okwu a na-arụsi ọrụ ike na ịntanetị ma nweta ohere dịka onye edemede na ndị na-eme ihe ike dị ka jalta.nl. Naomi nọ na-arụsi ọrụ ike ugbu a n'ịkwalite transgenderism, nke na-abụghị nhọrọ dị ịtụnanya maka ndị RTD oku, n'ihi na ozizi Lucifer na-agagharị gburugburu akwụkwọ mgbanwe mgbanwe nke mgbanwe nwoke; iji mesie ofufe nke Baphomet nke hermaphrodite ofufe (akara Lucifer). Ọtụtụ mgbe, nke a bụ mgbagwoju anya na nke Setan na ebube nke Setan, ma ihe oyiyi nke Chineke / Setan bụ nke abụọ nke bụ ngwá ọrụ iji ruo ihe mgbaru ọsọ. Na isi, Lucifer na-efe ofufe; ma nke ahụ bụ nnukwu ihe nzuzo. Ọ bụ ya mere ha ji akpọkwa ndị nzuzo nzuzo, n'ihi na ụdị osimiri Crowley na-adabere na nzuzo ha ma nwee ike ịbawanye n'ime nzukọ site na nhazi na ọkwa. N'ihe dị elu karịa ọkwa ahụ, otú ahụ ka ị ga-amata ihe nzuzo.
Ogologo oge gara aga (November 2017) onye transsexual kwuru na ọ maara Jeroen Hoogeweij ka Naomi Hoogeweij. Ọ maara ya site na otu ndị na-akwado maka 'ụmụ nwanyị trans' nke Humanitas na Rotterdam. N'ụzọ dị otú a, enwetara m ọhụụ banyere ọrụ nke ike a nke rụrụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ iji kwatuo Martin Vrijland. Gụọ ebe a:
Isiokwu: Naomi / Jeroen Hoogeweij
Ihe ndị na-esonụ m ga-edegara gị akwụkwọ n'eziokwu.
Abụ m onye transgender Schiedam, nwoke na-enwe mmetụta dịka nwanyị, nke na-enyocha nyocha (DNA).
Na mberede, mụ onwe m makwaara onye transgender Naomi / Jeroen Hoogweij ị kọwara. N'ịlaghachi azụ, nke ahụ adịghị atọ m ụtọ.
Abụ m onye transgender 63, bụ onye, ​​mgbe m lụsịrị 39 ruo ọtụtụ afọ, malitere ịnakwere ezi ọdịdị m n'afọ a. Nwunye m hụrụ n'anya kwadoro nke a ma anyị na-anọkọ ọnụ.
Enweghị m ihe ọbụla na-eme na ndò niile gbara gburugburu ọnụ ọgụgụ nke Aleister Crowley na ndị na-akwado ya. Enweghị m ihe ọbụla na okwukwe ma ọ bụ na ndị mmụọ ọjọọ. Otú ọ dị, m ghọtara na Templar na-eme ihe banyere ụdị ihe ọ bụla dị egwu.
N'ihe a, Neomi: A zutere m ya na ngalaba nkwado maka 'ụmụ nwanyị trans' nke Humanitas na Rotterdam na nke mbụ yiri ka ọ ga-aga nke ọma. Mgbe ọ mesịrị chọpụta na anyị na-agwa ibe anyị okwu, anyị malitekwara ịnabata ibe anyị n'ụlọ. M (na nwunye m, n'ụzọ) mara Naomi nke ọma ma hụ na ọ bụ ihe dị egwu n'àgwà, ma ejiri m ya kpọrọ ihe, n'ihi na ọ kụzikwaara m ọtụtụ ihe banyere ntụgharị uche na ihe ọ maara banyere ụfọdụ isiokwu. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọ na-aghọwanye ndị na-enweghị mmasị, nke na-agwụsị, na n'ikpeazụ, ọ bụ na mgbe m kwuru ihe m na Facebook site na Facebook, ọ mebiri m kpam kpam ma ọ bụrụ na ọ kwenyeghị. N'ebe ụfọdụ na-ewute m n'ezie ma m mechara kọntaktị ahụ. Ọ mebiri m ma boro m maka ya.
N'ịlaghachi azụ, aghọtara m na m letara ya n'ihi na ndụ dị ka onye transgender anaghị adị mfe mgbe niile, a na-akụkwa ndị transgender ahụ. Otú ọ dị, n'ụzọ dị mkpa, anyị bụ mmụọ kpamkpam. Neomi weputa onwe ya dika nwayi ndi ozo di egwu, nke na-adighi ike nke na amaghi uzo esi zoputa ya karia ogbagwoju anya nwoke (o bughi na ndi mmadu nile di ka ya). Ihe si na ya pụta bụ na ya na mgbu ya na njigide ya na-emetụta m, a gbakwara m azụ na Transsupport dị na Rotterdam. Amaara m site n'aka mmadụ abụọ ọzọ na-ebugharị onwe ya na o mewokwa ka ndụ nwee obi nkoropụ nakwa na ya enweghịzi ihe jikọrọ ya na ya. O yiri m na ọ bụ ihe ize ndụ nye ìgwè a nwere nsogbu.
Anụkwara m site n'aka ndị agbata obi m n'ụlọ na enwere onye uweojii banyere ya. E nwere asịrị nke pedophilia. Amaghị m otú ezi si dị. N'ọnọdụ ọ bụla, ekwenyere m, na-ele anya na ọgba aghara nke Neomi na-ejikwa na-eme ihe n'ịntanetị, na ihe na-ezighị ezi na ya.
Ihe mere ka m nwetakwuo na nkwurịta okwu ndị ahụ bụ okwu na-ekwu mgbe nile banyere mmekọahụ na ụdị dị oke egwu a na-akwado.
Mgbe m gbakwụnyere ihe niile, m na onye nwere àgwà psychopathic siri ike, onye ị ga-elele anya.
Ya mere enwere m ike ịghọta na ị nwere ọtụtụ nsogbu na onye a. Ogologo gi na oru gi!
Ugbu a, echerela m ogologo oge iji bipụta ozi-e ndị a, n'ihi na onye ahụ jụrụ ajụjụ na-atụ ụjọ maka Naomi Hoogeweij. Ma ozi ndị ọzọ bịara, na-egosi na Naomi abụghị naanị onye ọ bụla. Ya mere, ka m gbakwunye mzaghachi na e-mail a. N'okpuru ebe a ka m na-aza azịza nke m nwetara. Na nzaghachi a, o yiri ka a zụrụ Neomi site na ndị agha Izrel.
Daalụ maka emeghe gị. Mmetụta nke na-adịkarị bụ na m ga-enwe ihe megide ndị mmadụ na-enwe ụdị nwoke idina ụdị onwe ma ọ bụ megide ndị transgender. Nke a bụ nke Jeroen (nke a na-akpọzi) na nke a. Hoogeweij. Enweghị m ihe ọbụla megide onye ọ bụla ma m nwere ike iche n'echiche na ndị mmadụ na-enwe mgbagwoju anya banyere okike ha. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ onye transgender na-achịkwa saịtị mara mma nke na-esote m ọtụtụ ihe ma na-ezigara m akwụkwọ.
Ihe dị iche n'etiti gị na Neomi bụ na ọ ga-abụ na o nweghi ike ịhọrọ ya n'ihi na ọ na-enwe mmetụta n'ahụ nwanyị. N'okwu ya, o yikarịrị ka nhọrọ ọ dabeere na nkwenkwe Luciferian / Crowley. Nke ahụ n'onwe ya bụkwa nhọrọ nke onye ọ bụla nweere onwe ya ịhọrọ, ma na nke a, ọ bụ n'ezie ụdị ofufe nke na-esiri ya ike.
Onwe ya, nkọcha na nkwutọ nke ihe odide sitere n'aka Jeroen na-efu m ntakịrị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ihe kpatara eziokwu ahụ bụ na anaghịzi m ahụ nwa m nwanyị. Nke ahụ na-egbu mgbu. Ọ bụkwa ihe mere na ụlọ m na obi m funahụrụ m, ọ nweghịkwa ike ịchọta ọrụ nkịtị n'ime obodo.
Ọ bụrụ na ị kwenyere, m ga-achọ ịjụ gị ma ọ bụrụ na m nwere ike ịmepụta àmà gị n'enweghị aha na / ma ọ bụ jiri ya na ikpe ikpe nke m nwere olileanya na ị ga-emesị nweta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọrọ ndị ọzọ ihe ndị ọzọ gbasara nke a, ị nwere ike n'ezie.
Nwee obi ụtọ,
Mgbe ahụ, azịza nke nzaghachi m. N'eziokwu, a tụlere na ị gaghị edepụta ya, n'ihi na achọrọ m ichebe onye ahụ ajụjụ, ma ọ bụrụ na mbipụta a na-eduga onye na-ede akwụkwọ, ọ ga-ahụ nke ọma na nke a ga-abịa. Ọzọkwa, o yiri ka ọ dị m mkpa na nke a ga-apụta otu ugboro, n'ihi na enweghị nchekwa ma ọ bụ mgbatị maka ọgụ m na adreesị m yana gosipụta otú usoro ahụ si agba ọsọ.
O yiri m ntakịrị ihe ize ndụ, n'ihi na ọ nwere ike ịkọ ozugbo site n'akụkọ onye nke a bụ maka 'aha ya na-amaghị aha'. N'ọnọdụ ahụ, agaghị m enwe nchebe. Ị nwere echiche banyere otu esi emeri nke ahụ?
Ị chọrọ ịkọrọ ndị ọzọ banyere Neomi? Ndi ama ọfiọk ke enye ama anam utom ke udịmekọn̄ Israel ke ini akpa Intifada ndien nte ke enye ama enyene ndisụk ubọk ke inuak esie? Ọ gbalịrị ime ka ndị mmadụ mara ihe omume nke ndị agha Israel ahụ.
Ị ma na ọ dị ugbu a na nwoke na-arụ ọrụ ya mgbe ọ bụla ka ọ bụrụ iwu na-agafe ókè. Ọ nwere ike ịkọwara m otu esi egbutu mmadụ. N'elu onwe ya, nke a dị ka onye na-adịghị eche echiche, nwoke gbara alụkwaghịm (yana nwa nwanyị), onye m kwenyere na Neomi na-emegbu ya (ọ dịghịzi ego ọ ga-enweta n'onwe ya). Ọ bụrụ na o nwere ọrụ transgender, ọ ga-eziga ya. Ekwenyere m na ọ gaghị enwe ike ịkwado mmekọrịta ya ogologo oge.
Naomi kwuru na o mere na nwoke a guzosiri ike maka ya mgbe a na-akparị ya dị ka onye agha. Ọ gaara eme ihe ike. Anụwo m ihe ndị a n'ọnụ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịjụ ha.
Biko mara na enwere m ike itinye ebe a ozi e-mail ebe a ma ọ bụrụ na m nwere ihe akaebe siri ike nke a n'ime igbe mbata, ma ọ bụrụ na enwere ike ịkpọ ya nkwutọ ụgha na nkwutọ na agaghị m etinye ihe mgbochi nke ịnọ n'ụlọ mkpọrọ.
Naomi gbanwere 45 na September, ya mere ọ si na 1972. Nke mbụ intifada si na 1987 gaa na 1993 ma mgbe ahụ Jeroen ga-eje ozi n'ebe ahụ na njedebe nke oge ahụ. Ọ ga-enwe ọzụzụ ọzụzụ agha zuru ezu n'ebe ahụ ma na-ejikarị ụfọdụ usoro ọgụ na ọ ga-amụta. A ga-ewere ndị agha Netherlands dịka 'ndị agha chocolate' n'ebe ahụ. (Ọ na-amasị mmasị iji okwu ndị dị otú a mee ihe).
Juu? O nwere ike ịbụ n'echiche ụfọdụ: dị ka ya si kwuo, ọ bụ onye Juu, n'ihi na nne ya bụ onye Juu, dịka omenala ndị Juu si kpebisie ike n'akụkụ nwanyị ma ọ bụ nke ahụ. N'Israel, ọ ga-enwe ọzụzụ ọzụzụ Yeshiva, ebe ọ mụtara na ịkụta ibe gị ga - enweta 'ihe kacha mma' n'ime gị.
Ana m achọpụta nke a na Wikipedia: "Hesder jesjiva
N'Israel, e nwekwara oge azụ jesjiva, ebe Nnyocha nke Thorah jikọtara ya na ọrụ agha. Nke a na-ewe ọnwa iri na isii karịa afọ atọ gara aga. N'ógbè ndị ahụ, ndị agha ndị agha na-abụkarị ndị na-egbuke egbuke ma nabatara iwu sitere n'aka ndị rabaị n'ihe gbasara akọnuche. N'ọtụtụ oge, ha ajụla ime ihe iwu si n'aka ndị isi agha mgbe a chụpụrụ ha ebe iwu na-akwadoghị.
Hesder E ji ejikọta ya na ezumike omenala agba ya okpukpe Zionism na n'adịghị ka ndị Juu na-ekpe okpukpe ndị Juu charedic okpukpe ndị Juu kwado ya Zionism na dị ka mgbakwunye ya iji kere òkè na Israel agha ala.'
Emechara m mata na ọ na-arụ ọrụ maka AIVD na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ gwaghị m ihe ọ bụla banyere nke a. Otú ọ dị, ị gaghị enwe ike inweta akwụkwọ edemede dị otú ahụ dị ka nke ahụ. Ọ ga - ekwe omume na akụkọ "dị mma" nke ọrụ na ndị agha Israel na ezi mmụta - n'ihi na ọ na - asị na ọ nwere ya; na mgbe m na-eche banyere ime ya, m na-ahụ ọtụtụ akwụkwọ dị mma - enwere m ike ịga AIVD? Ma ọ bụ ka ọ nyere aka na ọ chọtara 'wheelbarrow' na ndụ nwoke nwere mmasị nwoke, nke o ji mesoo 'ndị a ma ama' dị ka Oscar Hammerstein na Pim Fortuyn? Ọ na-akọrọ bed na Fortuyn.
Site n'akụkọ ihe mere eme gara aga amaara m na a na-emekarị nna ya ihe ọjọọ ma weere ya 'siri ike'. E kwuru na nna ya na-etinye ya n'ụlọ akwụkwọ na England. Nke ahụ ọ bụ ihe mere o ji bụrụ onye eccentric, nke na-adịghị njọ ma na-emegharị ihe n'oge ndụ ya niile? Enwere m ike ịmalite ịdị na-eto eto mgbe m na-eto eto, mgbe ụfọdụ, ọ na-eduga mmadụ mgbe niile na-achọ inweta ya. Na agbanyeghị m abughi ọkà n'akparamàgwà mmadụ.
Ebe ọ bụ na m ga-akpachara anya ka m ghara iji akọ na-ezighị ezi, enwere m oge ọ bụla iji kwusaa ihe a nile. Ka ọ dị ugbu a, echere m na mmasị akwụkwọ akụkọ dị oke oke. Ọ bụrụ na ọ bụ ozi ụgha, ọ ga-egosi ihe niile ka ndị mmadụ si arụ ọrụ. Ya mere m na-etinye nzaghachi. Mbụ ihe m zara ma zaa ya.
Ama bara uru.
Ị makwaara banyere ọzụzụ na azụmahịa, ihe ndekọ ndị omempụ na ihe yiri ya?
Naomi na-arụsi ọrụ ike na weebụsaịtị Swapichou.
E nwekwara onye na-arụ ọrụ na-ede akwụkwọ n'okpuru psuedonym Ziva. Amaara m banyere nwanyị a na ya na-eje ozi na ndị agha Israel. Ya mere, usoro a na-aghọwanye nke ọma.
Ma lee mmeghachi omume na-esonụ:
Banyere agụmakwụkwọ ya, ọ sịrị na ya nwere akara mmụta bachelor na nkà mmụta uche na ogo mmụta na listi ndị Dutch na otu na nchịkwa azụmahịa. O yiri ka ọ dị m mkpa. Ma enwere otutu nkwado n'ime ya. Echere m na ike ya na-eme ka ọ kwenyesie ike n'onwe ya. M na-eche ma ọ dị mma. O nwere ike ịbụ ihe na-ezighị ezi dịka onye ọ bụla ọzọ m hụrụ ma ọ na-ekwughachi onwe ya. Ọzọkwa, ọnụnọ ahụ dị otu akụkụ na-amụ. I nwere ike ịhụ na ọ nọ na-egosi ndị mmadụ otu ihe ọmụma ahụ ruo ọtụtụ afọ.
Amaara m na ruo n'oge na-adịbeghị anya ọ bụ isi ngalaba ngalaba na RABO Bank dị na Utrecht nakwa na ọ ga - ejikwa ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ (ụfọdụ n'ime ha nyekwara ego). Achọrọ m nke a ma eche m na ọtụtụ n'ime ha - ọzọ - bụ ebe nrụọrụ porn. Na saịtị ndị ọzọ ọ na-arụsi ọrụ ike, dịka Swapichou, ọ na-eme mgbe nile iji dozie nke a ma ọ bụ nke ahụ, iji leghaa ya anya na ihe ndị dị ka nke ahụ.
Ọ ga - abụ onye ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke kwesịrị 'ịkwado' ma ọ bụ wakpo ihe ọ bụla yiri nkatọ nke Israel? Onye kwesiri ime ka ndi mmadu kwenye na Israel. Achọpụtakwara m otú ọ na-esi "azụ" onwe ya dị ka onye Juu. Enwere m mmetụta siri ike na o chere na ọ bụ akụkụ nke otu ndị a họọrọ. Maka mụ onwe m enweghi mba ndị a họọrọ, n'ihi ya enwere m ntakịrị iwe.
Amaara m na ihe ndekọ ndị omekome sitere na onye agbata obi, ma nke ahụ na-adabere na, amaghị m. Onwe ya, onye agbata obi a abụghị onye na-achọ ihe. Amaara m na agbata obi na Neomi kpasuru ndị ya iwe ihu. Dịka ọmụmaatụ, ọ kpọsara onye agbataobi m (nke a na-akpọ Pink Café) "enweghi ọgụgụ isi" dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe na-emekarị ikwu ụdị ihe ahụ. Ma eleghị anya ọ bụ onye ziri ezi, ma mgbe ahụ, ị ​​gaghị ekwu ụdị ihe ahụ? Nke a bụkwa echiche nke ịchọrọ idebe onwe gị karịa ndị ọzọ. Amaara m site n'aka onye agbata obi ọzọ na Neomi kọọrọ ndị uweojii maka 'ịbanye'.
E nwere omume na iwu n'etiti ndị mmadụ nakwa n'eziokwu na ọ na-eche na iwu ndị ahụ anaghị etinye aka na ya bụ ụdị àgwà psychopath ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị maara ya onwe ya, ọ na-emekarị njakịrị nke o yiri ka ọ na-eche banyere ndị mmadụ dịka 'ihe', dịka 'Ee, agaghị m eguzo n'usoro, ọ bụ maka ndị nzuzu. Ekwesiri inyere m aka ozugbo '. Ndị ahụ bụ njakịrị nkịtị, ma ọ bụrụ na ị nụ na ọ na-ekwu ọtụtụ ihe, ọ na-eme ka ị chee. Na na na.
Ee ee, obi mgbawa. Ma nke ahụ ọ bụ adịgboroja. Echeghị m otú ahụ ozugbo, n'ihi na ọ na-ekwu na ọ na-eji ọgwụ anọ dị iche iche maka nsogbu ahụ. E kwuru na ihe mere a ga-eji kpoo nkụchi obi bụ ihe metụtara ọgwụ ọjọọ. Ọ ga-enwe obi mgbawa ahụ mgbe ya na nwoke nwere mmekọahụ ma n'otu oge ahụ, nwa ya nwoke kpọrọ ya ma soro ya kwurịta ya. Mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ, e nwere ihe ga-esi na nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ pụọ. O wee jee ije n'ọdụ ụgbọ oloko n'abalị ma nwee ike igbu onwe ya. Ọ bụ ya mere mgbe ọ kpọrọ nne ya n'etiti abalị, ọ gaara ekwu, sị: "Ọ ghaghị ịbụ na ugbu a, ọ bụ abalị ma m nọ n'ụra." Ị nwere ike iche ụdị ezinụlọ a?
Ma na njedebe, Neomi amachibidoro ya ma ugbu a, ọ gaghachiri n'obi ahụ.
Martin, m ga-akwụsị maka taa. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla abata n'uche, m ga-ezitere gị ozi.
Jeroen Hoogeweij bi na Micha Kat n'akụkụ nkuku. N'oge ndị mbụ ahụ, mgbe m ghọtabeghị otú e si achịkwa mgbasa ozi ndị ọzọ na Netherlands, m malitere ide ihe ndị m na-ekwu site na ịnụ ọkụ n'obi na-adịghị mma, mmegide siri ike sitere n'aka Jeroen Hoogeweij, nke na-adịghị enweghi ike itinye oku na ebe nrụọrụ weebụ nke ebe a ma ama ebe m na-aga ma ghara ichota igakwuru mmadu nile site na ulo m onwe m iji wepu ozi. Micha Kat echeghị na ọ bụ atụmatụ ọma dị otú ahụ n'oge m ga-agakwuru onye agbata obi ya na igwefoto. Ugbu a ka m ghọtara ihe kpatara ya. Ihe mgbochi nke mmegide mmegide a na-achịkwa, n'ụzọ nkịtị, biri ndụ n'ụzọ nkịtị n'akụkụ akuku. Ọ bụ ezie na Jeroen na-awakpo Kim Kat, nke a abụghị ihe dị mkpa ma ihe bụ isi bụ iji kpuchie mwakpo siri ike na onye m na-enyekwa echiche na ndị agbata obi abụọ ahụ esighị n'otu ebe ahụ.
Ebe ọ bụ ihe ngosi m sitere n'aka 2014 anyị makwaara na Micha Kat (nke na-agbazi agbawa ugbu a n'ịntanetị ma ugbu a na-eme mgbanwe n'ịntanetị) nwere ike jikọta ya na netwọk nke ndị nwere ego na-enweghị aha dị ọcha. Anyị hụrụ njikọ ya na Jack Abramoff na Robert Rubenstein. Micha Kat na-ejikọta ya na nche anwụ anwụ na-eche na ọ bụ Council for National Policy (CNP). Ya mere, ọ bụ n'ezie njikọta niile. Nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ nke Netherlands na-etinye aka na Micha Kat site na mkpughe m, ma ha anọghị n'ihu ọha wepụ onwe ha site n'ọtụtụ afọ ha na-akwado nkwado, nke na-akwụ ụgwọ Kat a Frontier. Frontier bụ aha buru ibu maka ọtụtụ mgbakọ a haziri ahazi nke dọtara ọtụtụ puku ndị nleta; bụ onye na-agba akwụkwọ akwụkwọ na Jordaan na Amsterdam na onye bipụtara magazin a ma ama ruo ọtụtụ afọ. Ụdị ihe dị na mba mgbasa ozi ọzọ.
isi iyi: isgp-studies.com
Nye ọtụtụ ndị, onyinyo ahụ m dere na mgbasa ozi ndị ọzọ anaghị achọ ka ikike a na-achịkwa, n'ihi na ọ ghọọ ogidi ndụ. Ọ bụrụ na ị ga-enweta ụfọdụ ihe ọmụma site na ụfọdụ isi na mmadụ na-agwa gị ozugbo na ndị a bụ isi ihe ndị a na-achịkwa, mgbe ahụ ị na-agbaji ndị mmadụ tụkwasịrị obi na mgbe ahụ ihe ngosi uche nke akpọrọ 'dissonance'.
isi iyi: Cafe Weltschmerz (YouTube)
Na 2018 Jeroen / Neomi natara akụkọ banyere ọgba aghara ebe ọ ga - achụpụ n'ihi enweghị ego. Enwetara m ozi e-mail sitere n'aka onye ahụ site na nkwurịta ozi mail ahụ dị n'elu. Dị ka onye edemede ahụ si kwuo, Oscar Hammerstein (onye ọbịa si Café Weltschmerz) ga-agbachitere Neomi n'ihi na ọ gaara enwe mmekọahụ na ya. N'ịchọọ na isi iyi ahụ dị mma, ọ na-apụta ìhè na e nwere netwọk jupụtara aha ndị a ma ama.
Maka Ama gị akụkọ akụkọ a:
Ị marala nke ahụ? N'ehihie a ka m ga-enwe ụlọ ezumike. Naanị google na ee ... Ọ bụrụ na e nwere ihe na-ezighị ezi na ya mgbe ahụ, ọ na-eme mgbe niile na ọtụtụ ụda.
Ma eleghị anya ị maara Hammerstein. Ogbenye Oriaku Hoogeweij gwara m n'oge onye ọka iwu a bụ otu n'ime ụlọ ya. Ọ bụ ya mere o ji chọọ ịrụ ọrụ maka ya.
Enweghị m obi mgbawa ...
Ihe m chọrọ igosi gị na ozi a niile bụ na a na-enyocha ma mgbasa ozi ndị ọzọ na mgbasa ozi ọzọ. Onye ọ bụla nke na-abụghị nke egwuregwu a na-achịkwa ga-akpagbu n'ụzọ dị njọ ma wedata. Nke ahụ bụ ọrụ nke Jeroen Hoogeweij (nke a bụ Naomi). N'ihi nkwado siri ike nke ụmụazụ ole na ole, enwere m ike ijide na m ka na-adị ndụ. Nkwado ahụ bụ ihe mere m ji dị ndụ. Ọ ka bara uru iji hụ site na ogwe ike wee chọpụta na ozi sitere na netwọk mgbasa ozi ndị ọzọ nwere okpukpu abụọ nke e wuru na ma ọ bụ na-ejikọta ya na nụchara nke ọma nke e wuru na Ama (dịka akọwapụtara na ihe ederede n'okpuru m ihe aga aga). Nke ahụ bụ n'ezie nchọpụta na-agwụ ike, n'ihi na nke ahụ pụtara na ị gaghị enwe ike ịkwaghachi na kọfị kọfị ma ọ bụ biya iji kpochapụ ozi na ịnakwere ya maka eziokwu.
O di nwute na otu ndi mmadu a na-eme ihe n'emeghariri anya n'igwe n'igwe egwu ha, nke na-ekpuchi ihe ndia nile. Anaghị m eme nke ahụ n'ihi na enwere m mmasị nke ukwuu, mana m na-eme n'ihi na enweghị m nhọrọ. Enyere m aha m site na apịtị nke mere na e nwere naanị ihe abụọ fọdụrụnụ: gbadaa mgbe mwakpo niile m na-awakpo ma ọ bụ ịlụso isi m ọgụ dị elu ma kpughee ụgha ahụ. Achọrọ m maka nke ikpeazụ.
A na-akpọ Naomi Hogeweij ka a na-agbasa na nkwulu nke Martin Vrijland Jeroen Hoogeweij
Martin Vrijland na-akwụsị IMPORTANT UPDATE
Tags: ọkàiwu, Café Weltschmertz, CNP, Nchịkọta Maka Ntube Mba, Hammerstein, Hoogeweij, Jack Abramoff, Yalta, Jeroen, Kaiser, Micha, Naomi, mmegide, Oscar, Robert Rubenstein, Swapichou
Oh yes ... Hans Moll na-eme ide maka jalta.nl 😉
Oscar Hammerstein nwere ike ide ya na Café Weltschertz vidiyo maka Fortuyn wee tie ụlọ elu ahụ ọgụ, ma ọ bara uru itinye akụkọ a nile banyere Fortuyn ma ugbu a, FVD na mpaghara ikike a na-achịkwa. A na-eguzobe mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ dị ka netiti na netwọk nchekwa na mgbagwoju anya (maara na ịchịkwa) bụ akụkụ nke nke a.
Ka ọ dị ugbu a, Hammerstein na-agbachitere nwoke / nwanyị bụ ndị yiri ka ọ bụ ya ụghalaahịa iji mee ka ndị mmadụ maa jijiji. Kedu ka Hammerstein ga-esi kọwaa ya?
Enwere m ike iche na ị na-eme ihe dị otú a n'ihi na onye agadi hụrụ ịnụ Oscar (ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu).
ma eleghị anya ọ metụtara njikọta n'etiti ndị sitere na ndị Juu; Enweghị m ike ịchọta na site na ebe a. Adị m na-aga.
@Martin ị nwere ike icheta na mgbe ọtụtụ ọnụọgụgụ gbasara saịtị banyere Bijlmer ọdachi nke 1992, ICTS (Schiphol) ị malitere ịnweta ozi ịntanetị site na otu David Jan des Doods? Foto ndị mbụ gosipụtara na mgbasa ozi nke mba na nke mbụ na ebe ahụ bụ Willem Middelkoop onye nwebu Amsterdamgold (na Schiphol 😉 ọma m nọ ebe ahụ maka azụmahịa ma jupụta na ntinye 666 na akara Baphomet
Echere m na ọ dị mma na mgbakwunye na ihe omume niile 😀
The Cafe Weltschermtz vidiyo na-na emeghi mere na mmekota na SALTO.
Ụlọ ọrụ European Commission na TCA Resource Center guzobere na 2018 ka ha kwadoo Erasmus + National Agencies iji meziwanye ọrụ ha na-arụkọ ọrụ ọnụ (TCA).
Ihe mmekorita nke otu mba (TCAs) bu ihe oru maka Erasmus + National Agencies (NAs) iji me ka mmekorita di elu iji me ka ihe mmemme Erasmus + bido.
N'ihi ya, a na-achịkwa Cafe Weltschmertz na ndị na-emegide mmegide site na EU ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-akwado ya (SALTO); ọ dị mfe. A na-akpọ nke a mmegide a na-achịkwa.
..yes na ebe ahụ ka anyị na-ahụ maka nke a nakwa megide Steve Brown
Erasmus + na-enyekwa ohere maka ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka mahadum, agụmakwụkwọ ndị ọzọ na ndị na enye ọzụzụ, ndị na-eche echiche, ụlọ ọrụ nyocha na ụlọ ọrụ.
Usoro mmemme nke European Union's Erasmus + bụ atụmatụ ego maka ọrụ nkwado na ngalaba nke Education, Training, Youth and Sport.
Ihe mmemme a bu ihe ato a na-akpọ "Omume Iri" na ihe omuma abuo abuo. A na-ejikwa ha na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara nke mba dị iche iche site n'aka Ụlọ Ọrụ Mba na nke European EACEA ụfọdụ. Òtù European Commission bụ maka iwu Erasmus + ma na-elekọta usoro mmemme dum.
"Ee, ma De Vlieger, gị na ego gị, gịnị kpatara ị gaghị etinye ego" (lee ntinye)
Ọfọn n'ihi na anyị ga-eme ka anyị bụ ndị ọrụ afọ ofufo bụ ndị nwere ihe dịka iguzosi ike n'ezi ihe.
My ịnyịnya ibu.
E nwere naanị otu EU dị n'azụ Eric: ọhụụ ahụ adịghị eguzosi ike
@zalm, ghọta ihe ị na-ekwu. Ọ dị oke mma, maka ndị nwere ike ịhụ ya n'ezie
Willem Middelkoop na usoro ya nke nduhie bu onwe ya nke nduhie, ebe obu na ekwugh i okwu Israel / Zionism dika ihe di mkpa n'ile ihe n 'uwa nile. Kemgbe mmalite nke afọ '90 na-edepụta (maka onwe m) isi ike zuru ụwa ọnụ, karịsịa mgbe mbibi bijlmer dị na Amsterdam na October' 92 na m na-ahụ mgbe niile otu ndị na-eme ihe nkiri na-ekwurịta ihe gbasara 😀
Nke a bụ ezi aghụghọ na-ege ntị na ịma jijiji
Ọfọn, o doro anya na Ha na-ekpuchi ma mara ibe ha.
A na - ekwu na a tọhapụrụ Madurodam. M wee si n'aka onye ka a tọhapụrụ anyị? Anyị ka na-arụ ọrụ n'aka m. Ha kwenyesiri ike na nkasi obi na ogidi ha. Olee mgbe ha ga-apụ n'ezie? Nke ahụ bụ ihe ha na-ekwu.
Ọ bụrụ na anyị anaghị enwe nchekwube ugbu a, ọ bụ kpọmkwem ihe na-enye ya mgbagwoju anya. Nti biya na bratwurst iji kpochapụ ihe ilu ilu ahụ ..
Na Niburu.co onye na-akwadoghị micha Kat mgbe ụfọdụ, ma na-edepụta ihe site na aka ya n'afọ gara aga, enweghịzi ike ịbịaru akụkọ Evert-Jan Poorterman. Evert-Jan na-ekwu na m na-ezo aka na akụkọ a na-akpọ Histroy Chanel, ma a chọpụtabeghị na ihe ngosi ahụ na-eji Channel History na ihe ndekọ ha banyere ndị mmadụ dị ka Zakia Sitchin na Erich von Däniken ịkọwa ihe ha na-akpọsa.
N'ihe gbasara nchegbu m, Niburu.co bụ otu akụkụ nke mmegide mmegide a na-achịkwa na ijikọta eziokwu ahụ n'echeghị echiche.
Alexandra Hetebreij dị oke umengwụ iji lelee ọdịnaya nke Ever-Jan Poorterman ma chọpụtabeghị na akwụkwọ ahụ esiteghị na Channel History, kama ọ bụ nanị ntinye sitere na Channel History. Eleghị anya Evert-Jan na-ele anya na ebe a maka minit ole na ole na akwụkwọ. Ihe odide a dị ike ma na-akọwa nkọwa dị mkpa (nke a na-akpọ ụgha) n'ụzọ zuru ezu.
Na-akụda ozi ha nwetara site na saịtị a wee dezie ya dịka nzaghachi na saịtị ha. A maara nke ọma psyop / diversion ụzọ, nke mere na atụrụ na-eduzi ọzọ na shaving, karịsịa ịzụta orjana, nwere ike ịnọgide.
Neomi dere, sị:
Ọfọn, n'ihi ya ị na-ahụ ọzọ, ụdị obiọma. Luca van Buren, bụ onye na-akpọrọ Martijn niile a na-akwụ m ụta, na-agba m ụta, bụ onye na-egbubiga onwe ya ókè na-egbubiga onwe ya ókè, onye na-anọgide na-atụgharị mgbe ọ na-eme ihe. M gbalịrị inyere ya aka ruo nwa oge, mana enyemaka ọ bụla ọ chọrọ bụ nke ụlọ ọrụ mechiri emechi na ịkwa iko na ịnyịnya ibu ya. N'oge ufodu, ana m ewepu onwe ya na ya ma o nweghi ike igwu ya. Ọ ga-eziga akwụkwọ ozi ederede na Martijn (dị ka m na-elekọta). Na Humanitas o bibiri onwe ya n'ihi omume ọjọọ ya, enweghị m ihe jikọrọ ya na ya
Na uh .. Luca transsexual? Ee, dude. Martijn bụ n'ezie na ọ bụghị onye nwere ọgụgụ isi n'onwe ya, ma ọ bụrụ na mkpu ụda olu ga-ada ụda ya mgbe ọ gwara ya na ọ na-enweta "DNA ule" maka trajectory ya transgender. Ezigbo ọkpụkpụ, n'ihi na ọ dịghị nchọpụta DNA e mere ma ọlị na usoro transgender. Eziokwu siri ike bụ na ọ naghị enweta mgbanwe ya na nwunye na VUmc, n'ihi na ha chọpụtakwara na ọ na-echegbu onwe ya nke na ọ ga-enwe ike ịnagide usoro ahụ. Ọ tụgharịrị wee ghọọ onye ike na njedebe ya na njedebe ya. Ya mere ugbu a, ọ na-eme ihe na-abụghị eziokwu na nyocha DNA. Ọ bụ ezie na Luca abụghị transsexual, ma a transvestite. Otu nwoke na-eyi akwa ma ọ dịghị eme ihe ọ bụla gbasara ahụike ya.
Ogbugba a bu na o wakpoo mmadu ole na ole n'ime ulo ya nke o na-arutu aka na ya bu Miranda Beck-Bijl ka o jiri aka ya mechie ya site n'aka Luca van Buren, onye e jidere n'ihu . Nke a bụ isi isi nke Miranda Beck-Bijl (dịka onye nwere ike ịbịaru nso na Facebook) dị ka mgbe Luca mesoro isi ya na agbaji agbaji: https://imgshare.io/images/2019/05/06/29570730_2032593783654534_2819921000651502340_n-1.jpg
Ọ gbalịrị ịkụ n'ọnụ ụzọ tupu mgbe ahụ, ọ bụ onye na-ewe iwe ma na-enweghị ike ime ihe omume ya.
Dị ka Martin Vrijland n'onwe ya, n'ezie, onye nọworo na-ebe ákwá ruo ọtụtụ afọ ugbu a dịka "onye" m. Ọ ga - abụrịrị na ọ gaghị enwe ike ịhụ nwa ya nwanyị n'enweghị m, ọ ga - abụrịrị na ọ na - arụ ọrụ n'emeghị m ihe ọjọọ niile na - agba ya mgba okpuru na ọ bụ eziokwu na o mesoro ọtụtụ ndị inyom nsogbu. Dịka Luca, ọ gaghị enwe ike ibu ọrụ maka omume ya ma chọọ ihe niile n'èzí n'onwe ya. Nnọọ obi ụtọ.
Ya mere, uh, ihe ojoo Martijn, i meela nnukwu uzo ozo, Luca van Buren bu onye di ocha na onye na-egbu egbu, akuko ya bu ihe di egwu. Dịka egwuregwu, jụọ ụlọ akwụkwọ ihe ngosi banyere ihe nkedo nke o mere n'ebe ahụ, nke ahụ bụ onye ọrụ ya tupu ya emee.
Ọ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na a kpọbatara ya n'ụlọikpe. Mgbe ahụ, m nwere ike ịjụ ajụjụ a mere eji edozi ikpe a ma ọ bụghị akụkọ m megide okwu ọjọọ na nkwulu gị.
Ugbu a, ị malitere ịpị aha zuru oke aha Luca, nke a abụghị ihe dị mma.
O doro anya na ị na-elebu onye a anya dị ka enyi gị ugbu a (ugbu a na ọ dị gị mma) na-egosi gị dịka onye na-agba ara. Nke ahụ nwere ike ịbụ ikpe ahụ. Ekwuru m n'ụzọ doro anya na amaghị m ma enwere ike ịtụkwasị akụkọ ahụ, ma ọ bụ ihe dị ịrịba ama na m natara ya.
Ugbu a, anyị maara site na ihe akaebe gị na ị nwere ike itinye ihe ọbụla dịka ọ bụla ọzọ. Echetara m akwụkwọ akụkọ ndị uweojii na-ahụ maka ndị nwụrụ anwụ na Mkpanaka Anass. O doro anya na ị ga-agbakọta otu akụkọ uwe ojii na-adịghị ọcha wee pụọ na ya. Eleghi anya nke ahụ na-ekwu ihe gbasara njikọ gị?
Ọ gaghịdị eju m anya ma ọ bụrụ na ị jiri Luca a mee ọnyà. Ọ bụ otú ahụ ka ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ị na-ahụ.
Naanị m hụrụ nwa m nwanyị tupu akwụkwọ amalite. Enwere nnọọ iwu ikpe maka nke ahụ. Ị na-agba ọsọ na ịgha ụgha.
Àgwà gị agbanweela ntakịrị n'ihi na mgbanwe nwoke na nwanyị gbanwere. M ga-asị: Chee echiche banyere obi gị nwoke!
N'afọ ndị gara aga, egosipụtara m site na isi na ihe zuru ezu kpatara ya na ihe mere ị ga-eji kwupụta nkwupụta gị. Ị na-eleghara nke ahụ anya, n'ihi na ọ dị mma karịa n'okporo ámá gị iji kpọọ onye ahụ ụgha. Ị nweghị ikpe megide m dude. Site n'ụzọ, m na-emegide gị, gụnyere nke dị n'elu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara nkọwa m dị mkpa banyere nkwupụta ụgha gị nke na ọ dịghị onye na-eme ihe dị egwu n'ihi na ị nweghị iwu iwu ịkwado, gụọ nke a: https://swapichou.wordpress.com/2014/04/05/de-valse-aangifte-van-martin-vrijland/
Luca bụ n'ezie enyi m. Ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya m juru m anya, ịkpọasị na mwakpo na-abịakwasị ya ma achọghị m ịnwe ndị dị otú ahụ na gburugburu ebe obibi m, m na-akpalikwa ya ka ọ pụọ. Agaghị m akpakọrịta na ndị na-enweghị ihe ọ bụla, na-arụ ọrụ na otu iko na ihu ha, na-akụ ndị mmadụ ọnụ, na-akpọ mkpọsa ịkpọasị na ịntanetị, ma ọ bụ na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị ka gị na-azụ ha na ịkpọasị na ụgha. Luca nọ n'ihe ize ndụ nye onwe ya na ndị ọzọ na ọ bụghị naanị onye ahụ chọtara ya.
Kedu ihe ịchọrọ banyere akụkọ uwe ojii ahụ? Ị na-ata m ụta maka nke ahụ ma echere m na ọ bụ egwuregwu dị mma nke e wepụtara na gị. Ma enweghị m ihe ọ bụla jikọrọ ya na egwuregwu ahụ ị nwetara. M na-akatọ gị, gbasara nrigbu gị nke nne Anwas na-eru újú n'ụzọ zuru ezu. Nke ahụ mere ka ị bụrụ onye ruru unyi ma dị ala. Ot'odi si kwadoo okwu nlere anya nke ndi uweojii gosiri na nzuzu gi no na edeghari ihe omuma nke dabara n'okporo uzo gi, dika gi na okwu Luca bu banyere m. Enweghị nkwanye, enweghị nchọpụta, ị bụ nnọọ onye nzuzu, nsogbu na ihe ọjọọ iji nwee ike ịchọta ihe ọ bụla.
Enwere m Luca ịtọ ọnyà? N'ezie na-akpa ọchị. Otutu nsọpuru Martijn, ị na-arịọ ka m chebaa echiche dịka nke a, mana ị bụ onye na-enweghị mmasị na-enweghị mmasị maka onye m na-enweghị ike ime ụdị "ọdịda" ọ bụla. Ụbọchị ndị a ana m arụ ọrụ dị iche iche. Ụdị ihe dị ka ị kpaliri m ịrụ ọrụ gbasara ahụike onwe m ma ugbu a na-etinye m n'ọrụ n'aka ndị agadi na ndị ọkachamara banyere ịba ahụike. Echere m na onye dị ka gị bụ ihe na-adọrọ mmasị dịka onye ọrịa ma ọ bụ ndidi. Enweghị m nchegbu maka mmebi mmekọrịta nke ị na-eme ka ị gaa ikpe ziri ezi n'ụlọ.
Maka ihe ndekọ ahụ: Enweghị m ike ịkpọtụrụ mama nwa gị, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ile anya ụfọdụ ndị si gị. Anaghị m eche banyere kọntaktị gị na nwa gị. Ma i mehiere: ị ga-etinye foto nke nwa m na blog gị nakwa na ihe nwa m nwoke na-atụ egwu n'ihe ndị ahụ. Mgbe ahụ, ị ​​na-akpọ ya banyere onwe gị. Mụ onwe m nwere ike ịba ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ịbịakwute nwa m, ị nwere nsogbu. Ị nwetara nke ahụ nke ọma, ị kwụrụ ụgwọ ahụ.
Akụkụ gị na Swapichou bụ ihe mgbagwoju anya banyere ihe ndị bụ eziokwu banyere Jeroen n'ụzọ niile.
Agaghị m eweghachi nsogbu ahụ ọzọ iji rụchaa ya. A ga-atụle ya mgbe ọ ga-enwe ike ikpe ikpe.
Ezigbo nkwupụta nke m meworo na-abanye na nkọwa ndị ọzọ, ma ị na-ewere ihe dabara n'okporo ámá gị ma gbanwee ọtụtụ ihe dịka m na-eji n'aka gị.
Na ị gakwuuru Ex Andrea iji mee mkpesa megide m, site na ịbịakwute ndị ọzọ na-agbalị ime ka ha kwenye ịgha ụgha megide m (na m gaara emejọ ha), enwere m na teepu.
Amaghị m ma ị hụla vidiyo ahụ? Ma ọ bụghị, m ga-achọ itinye ya ebe a.
Ị na-ekwu, sị, "Enweghị m mmasị maka mmekọrịta gị na nwa gị," obi gị na-eche banyere onwe gị na-ekwu okwu na nke a. Ị maara nke ọma ihe mmebi ị mepụtara na ebe nrụọrụ weebụ gị nke ị na-agbanwe ihe niile; bipụta akụkọ data nke isiokwu na ihe ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, anaghị m abịakwute nwa gị, ọ dịghị mgbe m bipụtara ihe ọ bụla gbasara mmekọrịta gị na nwa gị nwoke. Ị nwere ike itinye ya n'ebe ahụ, ma ugbu a, ị na-eji onye na-aza ajụjụ n'okwu m, ihe ndị m wepụrụ, n'ihi mkparị ahụ megide m. Nke a abụghị eziokwu, n'ihi na ị malitere ụda ogologo oge tupu nke ahụ.
Otu akụkọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị isi ikpe mara m na ọ bụghị ma ọ bụrụ na Jeroen Hoogeweij na-akọ ya na ebe nrụọrụ weebụ jupụtara na mgbagwoju anya na ụgha. Otú ọ dị, ndị uweojii ọzọ enwetaghị m nzaghachi ma ọ bụghị na ọ ka nọ na pipeline.
Oh na ihe ngọpụ m na-akpọ gị Jeroen. Ọ bụ ihe niile dị mgbagwoju anya na Jeroboam na-wakporo otu oge na afọ ole na ole mgbe e mesịrị ị bụ na mberede nwaanyị.
Kedu ka ọ ga - esi kwe omume na e meela ka ị gbanwee usoro mgbanwe ahụ ma kwenye na ị ga - enweta ọzụzụ gbasara ahụike ma ọ bụrụ na gị onwe gị nwere mmasị na ịntanetị? Ị lere ya anya tupu ị gafee usoro nhọpụta? Ma ọ bụ, ọ bụ àgwà ahụ nke uche?
Enwetara m nkwupụta ahụ ka ị na-agwa ya onwe gị. O doro anya na ị gaghị azaghachi ihe m na-agbachitere, n'ihi na ị naghị enwe ụkwụ iji guzosie ike. Ọ bụrụ na ị kọọrọ ndị uweojii ihe ọzọ karịa ihe ị tinyere na ịntanetị, nke ahụ na-ekwukarị banyere gị. Naanị ihe m na-eme na nkwupụta ụgha ahụ nke ị bipụtara zuru oke, n'eziokwu na ezi akọ na uche, na n'okpuru njikọ m nyere n'elu ị nwere ike ịgụ kpọmkwem ihe ị na-agha ụgha, ịgha ụgha, ịkọ nkọ na ebubo ụgha n'onwe gị. O doro anya na ndị uweojii adịghị eche echiche dịgasị iche, ma ọ bụghị ya, a gaara ekpe m ikpe. Naanị ị nweghị ikpe.
Anyị na-enyocha gị na otu ìgwè nke ndị mebiri gị ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụghị "ịmepụta", mana ịkwụsị eziokwu gbasara gị, ndekọ akụkọ omempụ gị, ụkọ ego gị na otu ị si emejọ ụmụ nwanyị. Ị bụ onye omempụ, obi ọjọọ, ị hapụrụ ụzọ nbibi n'azụ, nke mere ka ị kwụsị ebe. Anyị enweela ihe ịga nke ọma na nke a ma anyị nwere olileanya na ị ga-amụta ihe mmụta gị n'oge ụfọdụ.
Ị bịalarị nwa m nwoke, ị na-etinye foto ya na mụ n'otu isiokwu. N'okpuru isiokwu ahụ, a na-atụkwa nwa m egwu n'ụzọ dị mgbagwoju anya. Ndị nwere mmasị nwere ike ịchọta nseta ihuenyo nke ya na isiokwu m jikọtara. n'ihi ya, ị na-agha ụgha. Ọzọ, abụrụ m "egwuregwu dị mma", ị pụghị imetụ m aka n'ezie. Ma ị na-ahapụ nwa m nwoke ma nwee ahụmahụ ahụ. Maka na ị nwere nsogbu na mgbe ị na-abịa akara ahụ, ị ​​gaghị adabere na m.
Afọ ole gara aga ka ị meghachiri nkwupụta ahụ ọzọ? Ị na-egosiputa na saịtị gị na ndị uweojii achọghị ikpe, ndị ọkàiwu ị bịarutere na-emeghị ihe ọ bụla na ya, ya mere ọ bụ ihe ezi uche dị na m ga-achọpụta na akụkọ gị agaghị ekwe omume? Adịghị adabere n'isiokwu m, ma dabere n'okwu nke aka gị.
Nọgide na-agba na-agba ọsọ Jeroen.
Ọ bụrụ na ọ dị gị na ìgwè gị, dịka ọmụmaatụ, anọ m n'ụlọ mkpọrọ. Eziokwu niile. Ọ bụghị otu ụbọchị!
Enwere m na teepu na Andrea gara ndị mmadụ ka ha kwuo okwu ụgha banyere m. Aghọtara m na ị naghị emeghachi omume na nke ahụ, ma gbalịa ịbanye n'ime ọrụ ahụ maka na m ga-awakpo nwa gị nwoke. Ebee ka foto a dị na gị na nwa gị? Adịghị m n'okpuru eriri ahụ ma anaghị m enwe mkpa ahụ.
Ooh ee, muo kwa ugwo ugwo ogugu ... rue mgbe m biputara ihe akaebe na nka bu ihe efu. Ekem ehichapụ akụkọ ahụ iji chekwaa ịtụkwasị obi gị.
Ị gabigara nkịta dị ka nkịta tupu i nwee ike ọbụna ikwu na m na-ebipụta ihe ọ bụla banyere nwa gị (nke m na-emebeghị, ma onye na-akọwa m ehichapụ). O doro anya na o nwebeghị ụdị àgwà a. Ị na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ Swapichou, ma nke ahụ abụghị kpọmkwem ebe a pụrụ ịdabere na ya, n'ihi na n'ebe ahụ ka ị na-eme otu ihe ahụ ị na-eme ebe a: Ihe ndị na-ezighị ezi ma na-eweta ya dị ka eziokwu, ebe ha abụghị eziokwu.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzaghachi ebe a, ma ọ bụrụ na enwere m nsogbu, anyị nwekwara ike ime nke ahụ n'ụlọ ikpe. Enwere m anya ugbu a bụ onye ọkịkpe ị wetara. Anaghị m ahụ uru nke ọma a-nkwurịta okwu nke a n'ụzọ dị iche, n'ụzọ ọzọ karịa na ị na-egosi na ị ka na-eti, na-eti mkpu, ma na-agbarụ gị gburugburu. Ị nọ n'elu iwu, ọ bụghị gị?
Ọ bụrụ na oge a na-apụghị ichetụ echere ga-abịakwute gị ka ekwenye gị na ikpe ikpe na ị ga-ejide n'aka m dịka onye na-elekọta nlekọta na ụlọ ọrụ, ị ga-achọpụta na m bụ onye nlekọta na-ahụ maka nlekọta nke ndị ọrịa ibe gị tụkwasịrị obi. Ị maghị m ma ọlị.
Ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ n'ebe anyị nọ, ka i wee ghara inwe ihe ize ndụ nye onwe gị ma ọ bụ ndị ọzọ, m ga-eme ka ọkpụkpụ dị iche iche dị iche. Enweghị m iji chebe nwa m ma ọ bụ gbochie gị imebi. Mgbe ahụ ọ dịghị ihe dị njọ. Ogologo oge ị na-ewere ọgwụ gị na oge.
Ee n'ezie. Nke ahụ ga-abụ nnukwu oge ọzọ! Nweta ọgwụ m na mgbochi n'aka Naomi!
O yiri ka ọ bụ ihe dị ịrịba ama!
Site n'ụzọ, ozi ọma Orwellian mara mma site n'aka 'onye na-elekọta gị'. O doro anya na agaghị m arịọ onwe gị maka 'ilekọta' gị (ma ọ bụ onye ọzọ) ma ọ bụrụ na iwu ụlọikpe nyere gị iwu. Ihe a na-enye iwu ka a ghara ịhụ dị ka ajụjụ nke gị, ma ọ dị mma, onye ọrịa psychiatric ahụ gbaghaara nke ahụ n'oge ahụ.
Ya mere, m ga-ahụ gị ọzọ na goldg. O yiri ka ọ bụ oge magburu onwe ya maka gị!
Onye ọbịa, ị gosiri n'oge gara aga na ị rapaara. Ma nke ahụ bụ ogige ndị uweojii, ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ, Amaghị m, ma na ị bụ onye mkpọrọ nke mbụ bụ ihe ị gwaworo onwe gị na ncha na agba.
Enwere m ike ijide gị ọzọ maka ụgha? Isi biko biko.
Naanị kwụsị ịgha ụgha. Nke ka mma.
Ekwenyere m na "onye na-elekọta ya" bụ akụkọ akụkọ Orwellian; obi mgbawa, mgbagha ọrụ. Mgbe m na-azụ ọzụzụ, ha na-eji okwu ahụ, ma nke ahụ bụ n'ihi na m nọ na klas na ụmụ akwụkwọ sitere na ụdị nlekọta na nụ ọ bụla na anyị na-eji ụfọdụ ụdị okwu. Mgbe anyị na-arụ ọrụ, anyị na-akpọ onye dị ka gị "ndidi".
Daalụ maka nkọwa gị. Ana m amalite ịhụ na ị ga-abụ onye nọọsụ na-ahụ n'anya.
A gbaghara mgbagwoju anya okwu.
Nwanyị Naomi ga - emeso gị ebere 🙂 Anaghị m ele ndị nọ n'ime anya, ọ bụla na mpụ ha, n'ihi na achọpụtara m na dịka akụkụ nke ọrịa ha.
Achọpụtara m na ọ ga-ama gị ikpe na ị ga-atụgharị uche na ntinye nyocha iji chọpụta nsogbu gị, achọla enyemaka ma nọgide na-ewute ọha mmadụ site n'àgwà gị. Ka o sina dị, a ga-enwerịrị ike ịchọtaghachi akụkụ ihe omimi nke àgwà gị.
Anaghị m enye onye ọ bụla nsogbu; ọ bụghị ọha mmadụ.
Nanị dee ihe m chere. A na-akpọ ya 'nnwere onwe ikwu okwu'. Ị nwere ike ikwenye ma ọ bụ kwenyeghị na nke ahụ wee kwupụta ya.
Ihe ị na - eme bụ (nke ị na - egosipụtakarị n'ebe a) na - anwa ime ka mmadụ daa n'ihi na ị kwenyeghị na echiche ahụ.
Ndị a bụ mgbalị iji gbochie echiche site na ọrụ a na-edeghị ede.
Ana m ekweta na m nwere ike imehie ihe ma mehie ihe. Abụ m onye ikpeazụ ịsị na m nwere eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha. Iche echiche gị site n'inye echiche gị na blọọgụ bụ ihe ọzọ karịa ịsị "nke a bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na ị ghaghị ikwere ya n'ụzọ ahụ".
Kedu mgbe mgbe echiche gị bụrụ mpụ. Ee, m ghọtara na nke a ga-abụ ikpe n'ọdịnihu dị nso, ma echere m na ị gara otu nzọụkwụ karịa ide ederede gị ma na-aga ịwakpo onwe gị. Aghọtara m na ị nwere ntinye akwụkwọ iji wepụ onwe gị pụọ na mpụ a.
Nwanyị Nwanyị Naomi nwere ike ịhụ ndị ọrịa ọgwụ ọjọọ n'anya. Enwere m obi ike ọ bụla na nke ahụ. Lee ọnọdụ magburu onwe ya ọ ga-abụ maka gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ha enweghị ike imegide gị, n'ihi na mgbe ahụ, ụlọ ọrụ na-enweghị windo na ụfọdụ ọgwụ ndị ọzọ.
Naomi Naomi / Jeroen ma ọ bụ ndị ọzọ
Kwuo asụsụ gị n'elu ụlọ, tie mkpu, sị:
"M na-akatọ gị, gbasara nrigbu gị nke nne Anwas na-eru újú n'ụzọ zuru ezu. Nke ahụ mere ka ị bụrụ onye ruru unyi ma dị ala. Ihe ị na-eme banyere akwụkwọ akụkọ uwe ojii ahụ na-enweghị isi gosipụtara na ị bụ onye nzuzu na ị na-edepụta ozi. "
Akwụkwọ akụkọ ndị uweojii ahụ mere ka Martin nụ ihe zuru ezu ma chọpụta na nne Zohra Aouragh nyere Martin n'onwe ya.
Ọ chọrọ inye aka na nne na nke a nwere ike ịchọta site na ebe ochie nke MartinVrijland website n'oge ahụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ ghaghị ịtụkwasị nne ya obi site na akụkọ ndị uweojii dị iche iche, ma ọ bụghị, ọ na-ekweta na ọ bụ nne.
Ma n'oge na-adịghị anya akụkọ ahụ agaghị ekwe omume n'ihi na ọ ga - ekwe omume na ndị uweojii nwere ndị na - acha uhie uhie na - ekiri, nkịta, ịnyịnya na helikopta apụghị ịchọta ahụ (na - atụgharị site na osisi) n'abalị dum mgbe jogger mere na itoolu. na ụtụtụ, akụkọ ahụ enweghị ike ịbụ eziokwu. Ọ bụrụ na nne na-enweta akụkọ dị otú ahụ, mgbe ahụ, ụda mkpu ụda nke nne ya ga-apụ, mana ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ya ...
Ma ọ bụ ihe ijuanya na nne ahụ nọdụrụ n'ihe ndina ya na mgbede ahụ mgbe ọ gara ndị uweojii ma kọọrọ ya na ọ dịghị efu. Dịka nne ị na-eti mkpu nwa gị n'èzí.
Dịka nne ị naghị ekwu mgbe ị hụrụ foto nwa gị, "ị hụrụ: Ọ dị njikere"
A ga-egosiputa ma gosipụta ya ................ >>>>>
Ọbụna onyeisi obodo bụ Hoekema kwuru na mmemme na TV, "Ee, ọ bụ ihe omimi na achọtara nwa okoro ahụ n'elekere itoolu nke ụtụtụ mgbe a na-enyocha otu ebe ahụ n'abalị dum. Ọ dị nnọọ ịtụnanya n'ezie.
Ihe bụkwa ihe omimi mgbe a gwara ya na nwanne Annas egosighi iru újú, ọ na-achị ọchị n'azụ olili ozu (lee foto foto) na ụmụ ndị agbata obi na-ahụ ya dị iche na ọ nweghị ezigbo iru uju. )
Ihe ozo di iche bu na nne adighi etinye aka na ikpe ikpe na agbanya maka ime ka o doo anya, o bu ihe di iche bu na o nwere ndi nkuzi di iche iche ato n'ime izu ole na ole.
Ọ bụ ihe ijuanya na Annas gwara onye ọkwọ ụgbọ ala nke nọ n'ógbè ya na ọ ga - apụ (maọbụ onye na-anya ụgbọ ala, onye maara)
Ozo di iche bu na emere ihe ngosi na The Hague site na ndi oru egwu ebe nna no na aru ya ma o ka ekwenyeghi na igbu onwe ya, gini mere onye nwe ahia adighi na ngosi
Ndi nne na nna agafela na njedebe, ee e? Ma ọ bụghị ya, nke a ga-abụrịrị ihe ọkụkụ maka Telegraaf na ebe ndị ọchịchị na-achịkwa / obodo na-achịkwa dị ka: "Crimesite, De Bovenkamer Maud Ooortwijn, Boublog ?? Niburu.co, etcetera
Ihe gbasara Annas nwere ike iju anya karia anyi chere
Archives nke MartinVrijland n'oge ahụ
The Show gara n'ihu, ebee ka nne ahụ nọ?
Agbanyeghị ekele maka ntụrụndụ Martijn. Debe ya!
Achọpụtara m na njakịrị dị na luciferian dị egwu.
Ka o sina dị, ị gaghị anwa anwa ịdee azịza ndị a. Ị ghaghị imechie ọnụ gị "azụ azụ", mana eziokwu bụ na ọ dịghị eme ihe n'eziokwu, ikpe ziri ezi ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù n'ebe ị nọ. Nanị ihe i nwere ike ime bụ ịkọ akụkọ ọjọọ na-achọ ịma ụta maka ihe niile na-eme gị n'èzí. Ikwesighi ighazi, ma ihe omimi nke efu efu.
N'ụzọ dị mwute, ọ bụ "unmasked" na ọ bụghị "unmasked", mongol. Ị na-egosipụta onwe gị dịka onye na-agụghị akwụkwọ.
ma o nweghi ugbua ma obu d ma obu bu, i ghara.
Mascara bụ na k ma ọ bụ c, ị ga-amata ugbu a 😉
Bịa, dude, nọrọ ntakịrị egwuregwu, anyị adịghị eme mkpesa na chi ahụ mehiere gị, i nweziri ike imeziwanye nke ahụ ọzọ, ọ bụghị gị, ọ bụ ya, ọ bụghị ya?
I gosiputara obi gi site na iyi obere obere.
Ndị Mongol ma ọ bụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa mara mma, ma eleghị anya, ị ghakwara ịgbanwere ya
Ma n'ezie, ị bụ nkịta ụjọ, dịka nwanyị ọ bụla ọzọ na-awakpo nwanyị, onye na-echegbu onwe ya, nke dị ala ma dị nta iji baara gị mba. Echere m na ị ghọtara na omume a na-eme ka ị bụrụ onye a ga-akwụ ụgwọ.
Ịchọrọ n'ezie ka m mee ka ị bụrụ onye ọzọ? O yiri ka ị na-arịọ maka ya. Echegbula onwe gị, ị nọworị ebe m chọrọ ka ị na ebe ị nọ, na nsị nke ọha mmadụ a. Enweghị m ihe ọ bụla ọzọ.
ya mere ị na-ahụ ọzọ na anyị nọ ebe a na saịtị ahụ, anyị ga-echere ka anụ ahụ pụta. ọnụ ọgụgụ ndị dị ka hoogeweij na-aga nke ọma iji mee Netherlands ka ọ bụrụ obodo a na-enweghị ike ịchọta. ugwo ogugu ndi mmadu na-acho uzo di elu, oji di oji ma ozo, ma mgbe o richara ya, o nwere ike ibu onye enyi ya onno ka ya na ndi mmadu na-agbarita ndi mmadu na-aghaghari. ọnọdụ dị na madurodam.
Nke a na-enye ntụziaka ọzọ, ị nwere ike ịhụ site n'aka onye a na ọ jupụtara na emetọ, ịkpọasị ọjọọ na ọdịmma onwe ya. Juputara na ịwakpo mkparịta ụka, mkparị, okwu ụgha, wdg. Ọ nwere ike kwubie na onye a nwere nchegbu siri ike. Ndị na-eme ihe ike maka ọha mmadụ, enweela enwere isi n'aka ya.
"Ị bụ kpọmkwem ebe m chọrọ ka ị na ebe ị nọ, na ụlọ mkpofu nke ọha mmadụ a."
Nke ahụ na-egosi na onye a na-eme ka ndị mmadụ nwee iko dị ntakịrị nakwa na onye ahụ na-eche na ha akụtuola mmadụ kpamkpam. Nnukwu uche na egwu. Ọtụtụ na-ahụ ihe onye dị otú ahụ na-eme. Naanị site na ederede ị ga - enweta ndị niile na - agba ọsọ ma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo mkparịta ụka na ụdị onye ahụ, ị ​​malitere ịsọ oyi ebe. Nke a bụ otu n'ime ihe atụ nke otu ụdị onye ahụ dị
na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ n'ime ha na madurodam na ndị ọzọ.
Ma ị nwere ike ịga n'ihu, mana nke a bụ naanị nzaghachi dị mkpirikpi.
" Akaebe na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ọzọ dị ukwuu na-emegide mmegide
Julie van Espen, Onye Belgium Belgium Anne Faber na onye ogbugbu bụ Steve B. onye Belgium Michael P. na PsyOp kachasị ọhụrụ? »
Nleta nile: 12.435.686